Yahoo inoratidza kutyora kwechitatu kwekuchengetedza mumwedzi mitanhatu chete | IPhone nhau
Yahoo inoratidza kutyora kwekuchengeteka kwechitatu mumwedzi mitanhatu chete
Zvakadini Yahoo! Haina zita, kana kuti zvimwe rinoita: kusava nebasa, kusagadzikana, kuvanda ... Zvese izvi, hongu, pasi pechiratidzo che "zvinofungidzirwa" nekuti munguva dzino, zvese "zvinofungidzirwa" kunyangwe hazvo humbowo huri kurova isu kakawanda uye zvakare.
Kuenderera mberi nezvinoita kunge yave tsika, iyo kambani Yahoo nguva pfupi yadarika yakaratidza kuti mamwe mamirioni makumi matatu nemaakaunzi akawanikwa nevanopinda mukati memakore maviri apfuura.. Uye zviripachena, aya maakaunzi anofanirwa kuwedzerwa kumaakaunzi atove kukanganiswa nechero zvikanganiso zvekuchengetedza izvo kambani yakanga yazivisa kare.
1 Mamwe mamirioni makumi matatu nemaviri maakaundi emaail account akafumurwa mumakore apfuura
2 Marissa anopera bhonasi
3 Ipfupi asi yakasimba track rekodhi yezvinhu zvekuchengetedza
Mamwe mamirioni makumi matatu nemaviri maakaundi emaail account akafumurwa mumakore apfuura
Kana iwe uine email account neYahoo, zviri nani kuti uzvibvise. Kana kuti pamwe kwatononoka uye zvakavanzika zvako zvakasviba, kana rako rakavanzika data, zvazivikanwa kune anoziva ndiani. Ichi chingangove chimwe chinhu chausingamboziva, uye pamwe zviri nani kuti uzive nedzimwe nzira.
Email kubva Yahoo yakave nematambudziko akakomba, akakomba kwazvo ekuchengetedza kwemakore mashoma apfuura. Ichi hachisi chinhu chitsva, asi zvinoshamisa kuti nguva zhinji kambani inotaurira matsva matsva asiri matsva kudaro. Uye kune atove matatu ma ads mumwedzi mitanhatu chete.
Yahoo yakangozivisa izvo zvakapoterera Mamiriyoni makumi matatu nemaviri emaimeri akafumurwas, uye vakatomboshanyirwa nevapambi, mumakore maviri apfuura. Iyi nhamba inofanirwa kuwedzerwa kuhuwandu hwemaakaunzi akafumurwa mune mbiri dzakapfuura zviziviso zvekuchengetedzeka zvikanganiso zvakaitwa nekambani
Maererano ne rakabudiswa Reuters, maakaundi akange akanganiswa achishandisa makuki. Yahoo inogutsikana kuti Iye munhu akawana aya maakaunzi ndiye "mumwechete-anotsigirwa nyika mutambi anoitisa 2014 kubira."
Kune avo vasingazive zvakaitika mu2014, kana kuti vakanganwa, iko kukanganisa kwakabata angangoita mamirioni mazana mashanu emaakaundi, asi kambani haina kuzivikanwa ziva nezveichi chinetso chakakomba kusvika mwedzi mina chete yapfuura, chimwe chinhu chingadai chisinga zivikanwe dai kwanga kusiri kwekuyedza kwemubati aiedza kutengesa ruzivo rwese rwakawanikwa (email kero, nhamba dzerunhare, mazuva ekuzvarwa, password zviyeuchidzo, mibvunzo yekuchengetedza uye mhinduro dzayo ...
"Kubva pakuferefetwa, tinotenda kuti munhu wechitatu asingabvumirwe akawana kodhi yekambani kuti adzidze kugadzira mamwe makuki," akadaro Yahoo muchirevo chayo chegore.
Kuti uedze kugadzirisa dambudziko iri rekuchengetedza, Yahoo inoti yakaita kuti makuki aya asashanda zvekuti haachakwanise kushandiswa kuwana maakaundi evashandisi..
Marissa anopera bhonasi
Pamusoro pezvo, Yahoo yakazivisa izvozvo haizobvuma kuna Marissa Mayer, maneja mukuru, iyo bhonasi yemari ye2016 nekuda kwezvakawanikwa nekomisheni yakazvimirira kuferefetwa nenyaya dzekuchengetedza dza2014. Mayer iye pachake akatopa kuti arambe chero mabhenefiti akawedzera muna2017 nekuda kwekutyorwa kwedata uku.
Ipfupi asi yakasimba track rekodhi yezvinhu zvekuchengetedza
Kuchengetedzwa, kana kuti kunetseka kwekuchengetedzwa kwaYahoo, kwave kuri pamberi peji kwenguva refu. MunaGunyana wegore rapfuura, Yahoo yakasimbisa izvo Mamiriyoni mazana mashanu emaakaundi akange abiwa pakupera kwa500. Uye kana izvo zvisina kukwana, muna Zvita akazivisa izvozvo imwe bhiriyoni maakaundi akafumurwa muna 2013.
Uku kuzivikanwa katatu kwekutyora kwekuchengeteka kunoitika mukutora Yahoo na Verizon, kambani iyo yakatodzikisa mutengo wekutenga nemamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu dollars inokodzera chaizvo kumatambudziko aya. Chibvumirano chinotarisirwa kuvhara mukati mekota yechipiri yegore rino, kunyangwe Verizon yatove kunyevera kuti kutyorwa kwedhata kunogona kunonoka "kusangana kwaYahoo neVerizon mushure mekuvhara." Chii chimwe, kuchine nguva yekuti zvimwe zvipuka zvakapfuura zvibude 😈😈
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Yahoo inoratidza kutyora kwekuchengeteka kwechitatu mumwedzi mitanhatu chete
Apple inovandudza peji rayo rakanangana nekusimudzira Homekit